အသငျးပွောငျးခှငျ့ရရနျ ပွိုငျဘကျအသငျးအင်ျကြီဝတျဆငျပွီး လကေ့ငျြ့ရေးကှငျးသို့ လာတဲ့ တိုကျစဈမှူး ဘာဖွဈသှားလဲ? – Play Maker Sports Journal
အသငျးပွောငျးခှငျ့ရရနျ ပွိုငျဘကျအသငျးအင်ျကြီဝတျဆငျပွီး လကေ့ငျြ့ရေးကှငျးသို့ လာတဲ့ တိုကျစဈမှူး ဘာဖွဈသှားလဲ?
ပွီးခဲ့တဲ့နှဈမြားအတှငျးမှာကစားသမားပေါငျးမြားစှာတို့ဟာကလပျကနထှေကျခှာနိုငျဖို့အတှကျနညျးလမျး ပေါငျးစုံ သုံးပွီးကွိုးပမျးခဲ့ကွပါတယျ။ကလပျကထှကျခှာရစတေဲ့နညျးလမျးကလညျးမြားစှာရှိပါတယျ။
ပုံမှနျအားဖွငျ့ကစားသမားတှဟောကလပျတှထှေကျခှာရဖို့အတှကျလကေ့ငျြ့ခနျးဆငျးဖို့ငွငျးတာမြိုး၊မီဒီယာကနေ ထှကျခှာလိုကွောငျးမကွာခဏပွောတာမြိုးလုပျလရှေိ့ကွပါတယျ။ဒါပမေယျ့လမျကယျဇီးကတော့နညျးလမျးသဈ သုံးလာပါတယျ။
သူဟာကလပျရဲ့လကေ့ငျြ့ရေးကှငျးသို့ ပွိုငျဘကျကလပျအနျဒါလကျချြရဲ့အင်ျကြီဝတျဆငျပွီးရောကျလာခဲ့တာဖွဈပါ တယျ။ဒါပမေယျ့ဂိတျပေါကျမှလုံခွုံရေးကလညျးသူ့ကိုအတှငျးသို့ဝငျခှငျ့မပေးခဲ့ပါဘူး။
မကွာသေးမီတုနျးက၎င်းငျးက “ကြှနျတျောကတော့ ဂရိသှားခငျြတယျ။ပုဂ်ဂိုလျရေးသဘောတူညီမှုလညျးရထားပါပွီ” လို့ပွောကွားသှားပါတယျ။
ပါနာသီနိုငျကို့ဈကို အနျ့ဝတျချနညျးပွဟောငျးလကျဈဇီယိုဘိုလိုနီကကိုငျတှယျနပွေီးအသကျ၂၄နှဈရှိတိုကျစဈမှူးနှငျ့ ပွနျလညျလကျတှဲနပေါတယျ။
သူဟာအသငျးရဲ့လကေ့ငျြ့ရေးကှငျးသို့ပွိုငျဘကျကလပျအနျဒါလကျချြအသငျးအင်ျကြီကိုရညျရှယျခကျြရှိရှိဖွငျ့ဝတျဆငျကာ လာရောကျမှုအတှကျ ပရိသတျမြားရဲ့အကွီးအကယျြဒေါသထှကျခွငျးခံခဲ့ရပါတယျ။နောကျပိုငျးမှာသူဟာယငျးလုပျရပျအတှကျပရိသတျမြားကိုလူသိရှငျကွားတောငျး ပနျမှုပွုလုပျခဲ့ပါတယျ။
ကလပျနှဈခုအကွားမှာအပွောငျးအရှနှေ့ငျ့ပတျသကျပွီးဆှေးနှေးမှုမြားပွုလုပျကွပမေယျ့သဘောတူညီမှု မရရှိပါဘူး။သူ့ရဲ့စာခြုပျက ၂၀၂၂ခုနှဈမှာမှကုနျဆုံးပါမယျ။
အသင်းပြောင်းခွင့်ရရန် ပြိုင်ဘက်အသင်းအင်္ကျီဝတ်ဆင်ပြီး လေ့ကျင့်ရေးကွင်းသို့ လာတဲ့ တိုက်စစ်မှူး ဘာဖြစ်သွားလဲ?
ဒီဒီယာလမ်ကယ်ဇီးဟာရွိုင်ယန်အန့်ဝတ်ခ်မှာပြဿနာမီးခွက်ထွန်းရှာခဲ့ပါတယ်။သူဟာဗုဒ္ဓဟူးနေ့နံနက်ပိုင်း တုန်းကအသင်းရဲ့လေ့ကျင့်ရေးကွင်းသို့ပြိုင်ဘက်ကလပ်ရဲ့အင်္ကျီဝတ်ဆင်ပြီးရောက်လာမှုနဲ့အတူလေ့ကျင့် ရေးကွင်းသို့ဝင်ခွင့်မရဘဲနှင်ထုတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်များအတွင်းမှာကစားသမားပေါင်းများစွာတို့ဟာကလပ်ကနေထွက်ခွာနိုင်ဖို့အတွက်နည်းလမ်း ပေါင်းစုံ သုံးပြီးကြိုးပမ်းခဲ့ကြပါတယ်။ကလပ်ကထွက်ခွာရစေတဲ့နည်းလမ်းကလည်းများစွာရှိပါတယ်။
ပုံမှန်အားဖြင့်ကစားသမားတွေဟာကလပ်တွေထွက်ခွာရဖို့အတွက်လေ့ကျင့်ခန်းဆင်းဖို့ငြင်းတာမျိုး၊မီဒီယာကနေ ထွက်ခွာလိုကြောင်းမကြာခဏပြောတာမျိုးလုပ်လေ့ရှိကြပါတယ်။ဒါပေမယ့်လမ်ကယ်ဇီးကတော့နည်းလမ်းသစ် သုံးလာပါတယ်။
သူဟာကလပ်ရဲ့လေ့ကျင့်ရေးကွင်းသို့ ပြိုင်ဘက်ကလပ်အန်ဒါလက်ခ်ျရဲ့အင်္ကျီဝတ်ဆင်ပြီးရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါ တယ်။ဒါပေမယ့်ဂိတ်ပေါက်မှလုံခြုံရေးကလည်းသူ့ကိုအတွင်းသို့ဝင်ခွင့်မပေးခဲ့ပါဘူး။
မကြာသေးမီတုန်းက၎င်းက “ကျွန်တော်ကတော့ ဂရိသွားချင်တယ်။ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသဘောတူညီမှုလည်းရထားပါပြီ” လို့ပြောကြားသွားပါတယ်။
ပါနာသီနိုင်ကို့စ်ကို အန့်ဝတ်ခ်နည်းပြဟောင်းလက်စ်ဇီယိုဘိုလိုနီကကိုင်တွယ်နေပြီးအသက်၂၄နှစ်ရှိတိုက်စစ်မှူးနှင့် ပြန်လည်လက်တွဲနေပါတယ်။
သူဟာအသင်းရဲ့လေ့ကျင့်ရေးကွင်းသို့ပြိုင်ဘက်ကလပ်အန်ဒါလက်ခ်ျအသင်းအင်္ကျီကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြင့်ဝတ်ဆင်ကာ လာရောက်မှုအတွက် ပရိသတ်များရဲ့အကြီးအကျယ်ဒေါသထွက်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာသူဟာယင်းလုပ်ရပ်အတွက်ပရိသတ်များကိုလူသိရှင်ကြားတောင်း ပန်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ကလပ်နှစ်ခုအကြားမှာအပြောင်းအရွှေ့နှင့်ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ကြပေမယ့်သဘောတူညီမှု မရရှိပါဘူး။သူ့ရဲ့စာချုပ်က ၂၀၂၂ခုနှစ်မှာမှကုန်ဆုံးပါမယ်။
ဇနျနဝါရီတှငျ အိုဇေးလျ အသငျးမပွောငျးဘဲ လုပျခပေါငျ ၈.၇၅ သနျးနှငျ့ သစ်စာရှိကွေး ရယူမညျကို အာဆငျနယျ စိုးရိမျနေ